Global Aawaj | के चैत्रमा शैक्षिक सत्र पूरा हुन्छ ? के चैत्रमा शैक्षिक सत्र पूरा हुन्छ ?
के चैत्रमा शैक्षिक सत्र पूरा हुन्छ ?
मेरा केहि आफन्तजन, सहकर्मी र घरबेटीलाई कोभिड-१९ ले आफ्नो पञ्जामा लिन सकेपनि निल्नभने सकेन । उहाँहरुको अनुभव र अनुभूति सुन्दा यो महाव्याधि साँच्चिकै डरलाग्दो काल रहेछ । ‘ नमरी स्वर्ग देखिदैन’ भन्ने गरिन्छ। के नर्क नमरी पनि देखिन्छ ? जे होस अहिलेसम्म आफू त्यो नर्कको यात्रा गराउने कालको पञ्जामा पर्नबाट जोगिए पनि कतिबेला परिने हो र पञ्जाबाट फुत्किन सकिने हो कि होईन सम्झिदै पनि आङ सिरिङ हुन्छ,फुल्छ र काँडाले भरिन्छ।
विश्वलाई तवातवा बनाएको यो व्याधिबाट र नेपाल सरकारले लगाएको बन्दाबन्दीबाट बच्न आफ्नो जन्मघर लागियो र करिब ५ महिनाको बसाईपछि काठमाण्डौ खाल्डोमा फर्कियो। यस महाव्याधिले विश्वलाई तहस-नहस पारेका बेला नेपाल अछुतो हुने कुरा भएन। यसको प्रभाव आर्थिक, सामाजिक, राजनितिक र शैक्षिक जगतमा व्यापक रुपमा परेको छ । केहि मुठ्ठिभर कुपात्रहरुलाई भने नगदनारायण कुम्ल्याउने सुनौलो अवसर बनेर आयो कोरोना।
समस्या एक्लै नआई समाधान पनि बोकेर ल्याउछ भनेजस्तै भएको छ शिक्षा क्षेत्रमा । भौतिक रुपमा विद्यालय जान नसक्ने अवस्थामा अफलाईनका रुपमा रेडियो र टिभिमार्फत, कम प्रभावित क्षेत्रमा सनासाना समूह बनाई टोलटोलमा गएर सिकाउने र प्रविधिको पहुँच भएका ठाँउमा जुम र टिमलिंकमार्फत सिकाई सहजिकरण गर्ने काम भयो र अहिले पनि चलिरहेको छ । यसको प्रभावकारिता कति भयो र पहुँच कतिभयो भन्ने कुरा छलफल र बहसको विषय नै छ । शिक्षकहरु पनि प्रविधिमैत्री हुने कार्यमा निरन्तर लागिरहनुभयो ।
नियमित कक्षा सञ्चालन हुन सकेको भए अबको दुई महिनापछि यो वर्षको शैक्षिक सत्र पूरा हुने थियो । तर,परिस्थिति त्यस्तो छैन । चैत्रमा शैक्षिकसत्र पूरा हुने कि नहुने ? नहुने भए कहिलेसम्म र कसरी पूरा गराउने भन्ने विषयमा सरोकारवाला निकाय र व्यक्तिहरु बेखवर जस्तै देखिन्छन् । शिक्षा मन्त्रालय पुषको पारिलो घाम तापेर मस्त निदाए जस्तो छ । प्रदेश र स्थानीय सरकार पनि केहि नभए जस्तो गरिरहेका छन्।असंगठित अभिभावक र घरमा कोचिन बाध्य बालबालिका चिन्तित छन् अब के हुन्छ भनेर।
के यही चैत्रमा शैक्षिक सत्र पूरा हुन्छ त ? के यो शैक्षिक सत्रमा पाठ्यक्रमले तोकेका सबै उद्देश्य प्राप्त गराउन सकिन्छ त ! एक दुई महिना तन्काएर ? घटाईएको भनिएका उद्देश्य पनि कति पूरा भए त ? लेखाजोखा कसले गर्ने ? कसलाई के को धन्दा कसलाई के को धन्दा, घर ज्वाँईलाई खानको धन्दा भनेजस्तै सत्ता सञ्चालकहरु हुँदाखाँदाको संसद विघटन गरेर आगामी बैशाख १७ र २७ गते चुनाव गराउने भनेर उखर्माउलो मच्चाई रहेका छन् । यसका विपक्षमा रहेकाहरुलाई कसरी सत्ता प्राप्ति होला भन्ने ध्यानमा नै व्यस्त छन् । यतापट्टि सत्तापक्ष र विपक्ष कसैको पनि ध्यान जान सकेको छैन र लान चाहिरहेका पनि छैनन् कि ? साँच्चिकै उहाँहरु कसैका पनि सन्तान शिक्षालयमा छैन्न कि जस्तो ।
ग्रामिण भेगका विद्यालयहरु दशैतिहारपछि सञ्चालनमा आएका भए पनि काठमाण्डौका भने आएका छैनन् । सुनिदै छ अब माघ पहिलो साताबाट सञ्चालन गर्ने रे । गजेट र कोठामा कोचिन बाध्य भएका विद्यार्थिका लागि त खुशीकै कुरा हो यो । साथिभाईसंग लामो समयपछि प्रत्यक्ष भेटघाट हुने र रमाउन पाउने भए । के यो मध्य जाडोको बेला साँच्चिकै विद्यालय खोल्न उपयुक्त समय हो त ? युरोप अमेरिका जो प्रणालीमा चलेका छन् भनिन्छ उनीहरुले त खोलेर बन्द गरेको अवस्था छ भने हाम्रोमा के होला त ?
विभिन्न देशहरुमा कोभिडको दोस्रो लहरले तहल्का मच्चाई रहेको छ । त्यति मात्र होईन अहिलेकोभन्दा झन द्रुत गतिमा फैलिने परिवर्तित भाईरसले बेलायत आक्रान्त बनेको छ । यसको फैलाबाट भारतसम्म भैसक्यो र नेपालमा पनि आएको आशंका छ । परीक्षणको दायरा घटाएर शासकहरु कोभिड नियन्त्रणमा आएको देखाउन उद्दत देखिएका छन् किनकि उनीहरुलाई चुनाव चाहिएको छ । सडक र सभाहरुमा सर्वसाधारणलाई उपस्थित बनाउनु छ। बाख्रे बुढीका सन्तान मरुन कि बाँचुन के मतलब । जनता र विद्यार्थीको के मतलब सत्ता बाहेकका कुरा उनीहरुलाई सब मिथ्या लाग्दछ ।
कार्यालय सञ्चालन र विद्यालय सञ्चालन गर्ने कार्य किमार्थ एउटै होईन । कार्यलयमा सिमित मानिस हुन्छन र सचेत र सजग पनि साथै WHO का मापदण्डण लागू गर्न सकिन्छ । विद्यालयमा त्यो करिब-करिब असम्भव प्रायः छ किनकि अत्यावश्यक भएर दिर्घशंका गर्दा त धुने पानी र साबुन हुदैन । विद्यार्थीले मास्क लगाउदैनन्, एक अर्काको जुठो खान्छन्, भौतिक दूरी कायम हुँदैन, बसाई अबधि लामो हुन्छ । सेनिटाइजर लगाइरहन पनि संभव हुदैन । हाम्रा सरोकारवालाले नियम कसरी पालना गर्छन भन्ने कुराको राम्रो उदाहरण त सार्वजनिक याताया छदै छ । भौतिकरुपमा विद्यालय खोल्ने हो भने अभिभावकसँग छलफल गरिनु पर्छ ।
भौतिक रुपमा पठाउने र नपठाउनेको तथ्यांक संकलन गर्नुपर्छ । भौतिक रुपमा पठाउन नचाहनेका हकमा अनलाईन कक्षा सञ्चालन गरिनु पर्छ । विद्यार्थीको कोरोना विमा गरिनु पर्छ । त्यो कसले गरिदिने ? अभिभावकले, विद्यालयले वा नेपाल सरकारले ? विमा नगरी कक्षा सञ्चालन त गर्नै हुँदैन । अहिले कसैका सनकका भरमा हतारमा सञ्चालन गर्दा त्यसबाट निस्किन सक्ने गम्भीर परिणामका लागि को जवाफदेही र जिम्मेबार हुने ? त्यसको टुङ्गो लाग्नु पर्दैन ? स्वस्थ्य विशेषज्ञ तथा सुप्रभात भण्डारीको सदाबहार अभिभावक संगठनले विद्यालयमा भौतिक उपस्थितिका लागि हतार नगर्न भनिरहेका छन् । तर,पनि एउटा समूह ज्यान फालेर भौतिक रुपमा विद्यालय सञ्चालनका लागि लागिपरेको छ। आरोप-प्रत्यारोप गर्नुभन्दा र स्थिति बिग्रन अगाबै सहि समाधान निकालेर मात्र अगाडि बढ्ने कि ? स्वास्थ्य र सन्तानभन्दा ठूलो धन अरु होइन कि ?
राष्ट्रिय महिला लिग फुटबल : सावित्राको ह्याट्रिकमा एपिएफ विजयी
विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले आर्थिक सुधारमा असर गर्दैन : अर्थमन्त्री
नेपाली कांग्रेसको विरोध वडा स्तरमा
एकै दिन पक्राउ परे २५ फरार अभियुक्त
खोप हस्तान्तरण कार्यक्रम
‘कोठा भित्रको खासखुसले श्रीमानहरुलाई प्रभावित नगरोस्’
प्रधानमन्त्री ओलीलाई कोरोनाविरुद्धको खोप हस्तान्तरण
नेपालमा पनि भेटिए नयाँ प्रजातिका कोरोना संक्रमित
‘क्याम्पस गायब ,विद्यार्थी अलपत्र’